Ikheli lethu lewebhusayithi ngu-https: //joopzy.com.
Uma ushiya amazwana kusayithi lethu ungakhetha ukonga igama lakho, ikheli le-imeyili kanye newebhusayithi kumakhukhi. Lokhu kwenzelwa ukukusiza ukuze ungadingi ukugcwalisa imininingwane yakho futhi lapho ushiya okunye ukuphawula. Lawa makhukhi azohlala unyaka owodwa.
Uma unayo i-akhawunti futhi ungena kule sayithi, sizosetha ikhukhi lesikhashana ukuthola ukuthi isiphequluli sakho samukela amakhukhi. Lekhukhi ayiqukethe idatha yomuntu siqu futhi ilahlwa uma uvala isiphequluli sakho.
Indlela esivikela ngayo idatha yakho
Yimiphi izinqubo zokuphulwa kwedatha esinayo
Yimaphi amaqembu wesithathu esithola idatha kusuka
Yini eyenza ukwenza izinqumo ngokuzenzakalelayo kanye / noma ukuprofetha esikwenzayo ngemininingwane yomsebenzisi
Izimfuneko zokudalula ezimboni